ခင်မောင်တိုး – ချစ်သူသိစေ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
ခင်မောင်တိုး – ချစ်သူသိစေ
December 7, 2008, 5:52 am Filed under: Songs အဆိုတော် ခင်မောင်တိုးသီချင်းတွေထဲ အကြိုက်ဆုံးသီချင်းများထဲမှာ “ချစ်သူသိစေ”သီချင်းလည်း ပါတယ်။ မဟာဆန်သူ ၊ ရတနာသူ ၊ ဝေးခဲ့ပြီပန်းခရမ်းပြာ ၊ ပန်းချစ်သူ ၊ ဒွိဟစိတ်နဲ့သုညမှာ ၊ ရိုးရိုးလေး ၊ အို ၊ တိတ်တခိုး အစရှိတဲ့ သီချင်းတွေကို သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ (၇)ရက် အမှတ်တရနေ့အတွက် နူးညံ့သိမ်မွေ့ကဗျာဆန်သော ဒီသီချင်းကို သိပ်နှစ်သက်သော “သူ”အတွက် စာသားလေးတွေပါ နားထောင်ရင်း ရေးဖွဲ့သီကုံးပေးလိုက်ပါတယ်။
ပန်းပွင့်ရှိမှ ရနံ့ရတာမဟုတ်ဘူး ~~ဖူးသည့်တစ်ငုံ ထုံသည့်တစ်ပွင့် ~နမ်းခွင့်တစ်ရှိုက်ရခိုက်မှာ ထာဝရအမြဲတည် ~~နှလုံးသားမှာ စွဲမြဲစွာထုံရစ် ~ ဆွတ်ပျံ့နေ ချစ်သူသိစေ ~တွေ့ခွင့်ရမှ မင်းမျက်နှာလ၀န်း ~ကြည့်ခွင့်တစ်ခါ မြင်ခွင့်တစ်လှည့် ~ မင်းမရှိလည်းစွဲမြဲစွာ~ ဘယ်လောက်ဝေးနေ ~ မော့ကြည့်ရင် မိုးကောင်းကင်လိုရှိ ~တွေ့လို့နေ ချစ်သူသိလေ ~
~ ဘယ်လောက်ဝေးဝေး ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ် ~~ တွယ်နှောင်ရစ်ငင်အိပ်မက်မှာအစဉ်အမြဲရှိ ~~~ နေရာချင်းလွဲလွဲ ဒေသချင်းကွဲကွဲ ~~ မြင်ယောင်စိတ်အစဉ် အိပ်မက်မှာရှိ ~ဖွင့်ဟပြောမှ ကြားတတ်တာမဟုတ်ဘူး ~ စီးဆင်းတဲ့စိမ့်စမ်းရေ ~ကျေးငှက်တို့တီးတိုးသံ ~~ ချိုစွာကြားရင် မင်းစကားသံ စွဲမြဲစွာကျန်ရစ်~ ကြားလို့နေ ချစ်သူသိလေ ~~
~ တွေ့ခွင့်ရမှ မင်းမျက်နှာလ၀န်း ~~ ကြည့်ခွင့်တစ်ခါ မြင်ခွင့်တစ်လှည့် ~~ မင်းမရှိလည်းစွဲမြဲစွာ ~ ဘယ်လောက်ဝေးနေ~ မော့ကြည့်ရင် မိုးကောင်းကင်လိုရှိ ~~ တွေ့လို့နေ ချစ်သူသိလေ ~ ဘယ်လောက်ဝေးဝေး~ ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ် ~ တွယ်နှောင်ရစ်ငင် ~ အိပ်မက်မှာ အစဉ်အမြဲရှိ ~~ နေရာချင်းလွဲလွဲ ဒေသချင်းကွဲကွဲ ~ မြင်ယောင်စိတ်အစဉ် အိပ်မက်မှာရှိ ~~ ဖွင့်ဟပြောမှ ကြားတတ်တာမဟုတ်ဘူး ~ စီးဆင်းတဲ့စိမ့်စမ်းရေ ~~ ကျေးငှက်တို့ တီးတိုးသံ ~ ချိုစွာကြားရင် ~~~ မင်းစကားသံ စွဲမြဲစွာကျန်ရစ် ကြားလို့နေ ချစ်သူသိလေ ~~
မလင်းလက်တစ်ယောက် ဘာတွေဖမ်းစားနေလဲဗျ. 🙂
You are in love….
Keep it up…….. အားကျလယ်..
December 7, 2008 @ 8:15 am Reply	ခင်မောင်တိုးသီချင်းတွေကတော့ အမြဲလိုမဟုတ်တောင် အခါတလေ အရမ်းနားထောင်လို့ သီချင်းတွေပါ။ရိုးရိုးလေးနဲ့ ဖွဲ့ထားတဲ့စာသားတွေကိုက စွဲလန်းစရာပါပဲ
Comment by အိမ်
December 7, 2008 @ 12:51 pm Reply	အဲဒီသီချင်းကို ကျွန်တော်လည်း ကြိုက်တယ်ခင်ဗျ။ စာသားတွေက အနက်အဓိပ္ပါယ် အပြည့်ရှိတယ်လေ။
Comment by JulyDream
December 8, 2008 @ 5:41 am Reply	ဒီသီချင်းလေကခုချိန်မှာတော့ကျနော်အတွက်တော့တော်တော်လေကိုတိုက်ဆိုင်မူရှိတဲ့သီချင်းလေဖြစ်တဲ့အတွက်ခုလိုနာထောင်ရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
Comment by ကိုထိုက်
December 9, 2008 @ 8:47 pm Reply	ညီမလေးရေ…သီချင်းလေးကြိုက်လို့ ယူသွားပြီနော်..ကျေးဇူးအချစ်တွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေ…
December 10, 2008 @ 12:35 pm Reply	It isapoem. I think the poet is mg sein win (ba tee gone)
December 16, 2008 @ 3:51 am Reply	very nice mentioned of Ko Khin Maung Toe’s songs Linlet !Thanks for sharing.
December 18, 2008 @ 9:51 am Reply	God Bless u
December 21, 2008 @ 4:51 am Reply	သူတို့ လင်းလက်ကို မနာလိုလို့အဲလိုရေးတာဖြစ်တယ်. တင်ပြတာရှိရင်တင်ပြပါ. ကဲ့ရဲ့တဲ့လူတွေပဲရှက်ရမှာဖြစ်တယ် သူတို့ပဲအပြစ်ရှိတယ်
Comment by ကရင်မ
January 4, 2009 @ 7:28 am Reply	hi sister, visiting u r blog, nice to read, listen music, ..
April 4, 2009 @ 8:55 pm Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI